Tag: ọwa | Martech Zone
Competitivewa nke asọmpi na-arịwanye elu nke oge a na-achọ mkpebi ngwa ngwa na ọbụna igbu ngwa ngwa, na ịrụ ụka adịghị ya na nke a chọrọ mmekọrịta siri ike. Ugboro nke Moxie nwere olile anya inye ndi ahia ohuru ngwa oru ndi n’eme ka ahia, oru ndi ahia na nkwado di n’ime ulo oru a. Site na itinye ihe niile, nnweta, njigide, na ohere dị elu nwere ike ịhazi ọnụ, egbu ma tụọ ha. Oghere nke Moxie kachasị mma maka nnukwu òtù. Ulo oru a kwesiri ibu uzo guzobe otu na ebe, ma nye ha